Manchester United Oo Guul Ku Bilaabatay Kulamadeeda Saxiibtinimo Ee Xagaaga & Rashford Oo Shabaqa Soo Taabtay - Gool24.Net
Manchester United Oo Guul Ku Bilaabatay Kulamadeeda Saxiibtinimo Ee Xagaaga & Rashford Oo Shabaqa Soo Taabtay
July 13, 2019 Saed Balaleti
Manchester United ayaa ku bilaabatay kulamadeeda saaxiibtinimo ee xagaaga guul ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen kooxda Perth Glory ee dalka Australia.
Red Devils ayaa u baahneyd ilaa iyo saacad si ay shabaqa u soo taabtaan markaasoo uu Marcus Rashford kubada shabaqa meel gees ah ka geliyay ka dib caawin qatar aheyd oo cirib uu ku soo baasay oo uu sameeyay Paul Pogba.
Da’ yarka James Garner oo 18 sanno jri ah ayaa saameyn degdeg ah yeeshay markii uu kursiga keydka ka soo kacay, isagoo ka faa’ideystay qalad difaacasho oo ay sameeyeen kooxda Perth Glory isagoo hogaanka u labeeyay Man United.
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa wada isticmaalay 23kiisa ciyaaryahan, isagoo wada bedelay safkiisa waqtigii nasashada, iyadoo xiddiga doonaya inuu baxo Paul Pogba uu ciyaaray qeybtii labaad, waxaana uu caawiye ka ahaa goolkii Rashford.
Walaaca kaliya ee Manchester United ay ka qabtay guuldaradaan ayaa aheyd markii uu daafaca bidix Luke Shaw ku soo baxay wax u muuqday dhaawac.
Saxiixa cusub Daneil James oo ay Manchester United kala soo wareegtay kooxda Swansea ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed fiican isagoo taageerayaasha Man United tusay waxa uu qaban karo qeybtii hore ee ciyaarta.
Wan-Bissaka ayaa isna ciyaaray qeybtii labaad waxaana uu u muuqdaa mid la qabsanaya kooxdiisa cusub iyadoo Man United ay heshay xiddig garabka midig ah oo u bedela xiddiga sii gaboobaya ee Ashley Young.